Warbixin Shaacisay Tirada Duurjoogta Sharci Darrada Loo Dhoofinayey Ee Somaliland Qabatay Illaa 2011kii – somalilandtoday.com
Warbixin Shaacisay Tirada Duurjoogta Sharci Darrada Loo Dhoofinayey Ee Somaliland Qabatay Illaa 2011kii
(SLT-Hargeysa)-Shabakadda Wararka ee Mail & Guardian oo laga leeyahay dalka Koonfur Afrika, ayaa baahisay in dowladda Jamhuuriyadda Somaliland ay tan iyo 2011kii joojisay 50 Harimo-cad oo si kootarabaan ah loo dhoofinayey.
Sidaasna waxa mareegta Mail & Guardian ku soo bandhigay war uu maanta daabacay oo ay soo xigatay Wakaallada Wararka Somaliland ee SOLNA, Waxaana warbixintaas dadka u dhaqdhaqaaqa duurjoogtu ay walaac ka muujiyeen dhoofinta sharci darrada ah ee duurjoogta Dalalka Bariga Afrika.
Mail & Guardian waxay intaas ku dartay in laba bilood ka hor la badbaadiyey 11 Harimo-cad oo si tuuggo ah loo doonayey in laga dhoofiyo Somaliland.
Wasiirka Deegaanka iyo Horumarinta Reer Miyiga Somaliland Marwo Shugri Xaaji Ismaaciil Bandare, ayaa sheegtay in korodhka ganacsiga duurjoogta loo iibgeeyo bariga dhexe ay waxyeelo ku tahay Somaliland iyo dhammaan dalalka kale ee Waqooyiga iyo Bariga Afrika.
Machad fadhigiisu yahay dalka Namibia oo u dhaqdhaqaaqa xakamaynta ka ganacsiga Duurjoogta ayaa tilmaamay inay Somaliland ku leeyihiin xarun lagu xannaaneeyo 14 Harimo-cad oo laga soo badbaadiyey dad qabsaday.
By Wariye May 18, 2021
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxa uu shacbiga Somaliland, dal iyo dibedba ku hambalyeynayaa...
Ururka Midowga Afrika ayaa weli ku adkeysanayaa magacaabista madaxweynihii hore ee Ghana John Mahama ee ergeyga...
Inkasta oo Maraykanka mar labaad horjoogsaday bayaan Golaha Ammaanku soo saari lahaa oo ku baaqayey in...